Maraykanka oo ka walaacsan dhaqaalaha la siiyo Soomaaliya in qayb kamid ah gacanta u gasho Al-Shabaab - Jubbalandi Media
by jubba | Thursday, Nov 2, 2017 | 269 views
Waaxda Arrimaha Dibbada Maraykanka qeybteeda u qaabilsan Afrika ayaa ka walwalsan in dhaqaalaha la siiyo dowlad Soomaaliya inay u wareegto ururka Al-Shabaab oo Soomaaliya ka wada dagaal ay ku arqaladaynayaan nabadgalyada.
Qaybta dabagalka Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka ayaa walaacan muujisay iyadoo sarkaal ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka ayaa waxaa uu sheegay in inaysan sameyn siyaasad iyo qorshe qiimeyn loogu sameeyo halista ah in dhaqaalaha Maraykanka uu bixiyo uu gacanta u galo ururka argagaxisad ah ee Al-Shabaab.
Warbixin ay soo saartay dowlada Maraykanka ayaa lagu sheegay in toddobadii sano ee ugu dambeysay ay ku taageereen ciidamada Milatariga ee Soomaaliya lacag gaareysa $66 million oo dollar.
Sidoo kale Baryaashan ayaa waxaa ay aaminsan yihiin in lacagtaas qeyb ka mid ah ay si dadban ku gaartay Al-shabaab,Balse aan la ogeyn Habka ay ku baxday lacagtaas oo ay gacanta ugu gashay xagjiriinta.
Baarayaashaan waxay tilmaameen inay suurtagal tahay in Al-Shabaab gacanta u gashay qeyb kamid ah dhaqaale loogu talo galay illaa 6,509 askari oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya kuwaas oo xaalad adag ku shaqeeya.
Dowlada mareykanka ayaa sheegtay inay il gaarka u yeelan doono gar-gaarka ay siiso Dowlada Soomaaliya,maadaama ay ka cabsi qabaan in dhaqaalaha ay soo dhiibaan Mareykanka loo Gacan geliyo Dagaalamayaasha Al-Shaabaab.
Wasaarada Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa waxaa ay warbixin ay caalamka ka soo saartay sanadkii 2016 ku sheegtay in ciidamada dowlada Soomaaliya ay xadgudub ku sameeyeen dadka rayidka ah kaas oo isugu jira kufsi xadhig sharci daro ah iyo jirdil.
Madaxda iyo shacabka Jubbaland oo maanta isusoo bax balaaran ku muujiyey dareenkooda.
Madaxda Dowlad goboleedka jubbaland iyo Shacabka reer kismaayo ayaa maanta si wada jir ah dareenkooda ugu muujiyey walaalahooda reer muqdisho ee waxyeeladu kasoo gaartey qarixi...